Maleeshiyo laga keenay gobol kale oo magaca xildhibaanada Somalia ku dilay dhallinyaro caan ka ahaa Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Maleeshiyo laga keenay gobol kale oo magaca xildhibaanada Somalia ku dilay dhallinyaro...
Maleeshiyo laga keenay gobol kale oo magaca xildhibaanada Somalia ku dilay dhallinyaro caan ka ahaa Muqdisho
Ilaalada Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Xildhibaan Mahad Cawad ayaa dil bareer ah u geystay mid kamid ah dhalinyarada Xaafada Wardhiigley oo lagu Magacaabo Cabdicasiis Cabdullahi Sheekhdoon.
Dilka foosha xun oo ay geysteen ilaalada Xildhibaan Mahad Cawad ayaa noqday mid ay aad uga argagaxeen una canbaareeyeen dhalinyarada, odoyaasha iyo haweenka Xaafadda Wardhiigleey.
Ilaalada Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka ayaa la sheegayaa inay istaajiyeen wiilkaan dhalinyarada ah isaga oo maraya wado hormarta hoyga uu degan yahay Mahad Cawad, kadibna markuu isku sheegayna ay toogteen ilaalada Mahad Cawad. Dadka xaafada ayaa aad uga xumaaday dilka maliishiyada ilaalisa Mahad Cawad u geysteen mid ka mid ah dhalinyarada ugu firfircooneyd Xaafadda Wardhiigleey agagaaraha Madaxtooyada.
Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Mahad Cawad ayaa la sheegayaa in ilaaladiisa uu ku keensaday qaab qabiil, maliishiyada ilaalisana aysan ka tirsanayn inta badan Booliiska Gobolka Banaadir. Laamaha Amniga ee dawladda ayaan imaan hoyga Mahad Cawad oo aan xirin gacan ku dhiiglihii dilka geystay taasoo ka dhigaysa Madaxda Dawladda taagta daran kuwo magaca dawladnimo ku dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed.
Xildhibaan Mahad Cawad ayaa qortay Maliishiyo tobaneeyo ah oo la sheegay inuu mushaharkooda iyo biilkooda ka bixiyo qarashaadka aadka u badan oo uu ka helo mooshinada Baarlamaanka la keeno xiliyadda uu shir gudoominayo, mooshinadaas oo inta badan ka dhan ah horumarka Muqdisho iyo dawladda Turkiga.
Mooshinada uu Mahad Cawad ku qaatay lacagaha faraha badan ayaa la sheegayaa inay kamid yihiin Joojintii shirkadda Turkiga ee Dhismaha iyo Maamulka Dekedda Muqdisho, Dib ugu celintii xukuumada ee shirkadda FAVORI iyo Joojintii kaararka aqoonsiga ee laga bixin jiray Muqdisho.
Madaxda Baarlamaanka oo markasta ka hadasha sharciga ayaa iyagu ah kuwo jabiya sharciga, magaca dawladnimadana ku dhibaateeya shacabka, iyaga oo uu mid kasta keensado gurigiisa maliishiyaad ku beel ah taasoo muujinaysa inaysan waxba uga bedelneyn hogaamiyo kooxeedyadii Muqdisho.
Madaxda Dawladda Federaalka Guud ahaan iyo Madaxda Baarlamaanka Federaalka oo uu ugu horeeyo Gudoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka Mahad Cawad ayaa ah kuwo dantii guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka hor mariya danaha gaar ahaaneed iyo danaha qabiilka ee u diidey Soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto.